Fuse zvigadziko Vagadziri & vanotengesa - China Fuse zvigadziko fekitori
Bhaudhi Yakabatanidzwa Round Cartridge Rudzi Runokurumidza-kuita Fuse ...
Yakakosha Fuse Bases / Vabati
Null mutsara fiyuzi
Iwo mabhesheni anoumbwa neiyo yakakwira-density ceramic, isina kupisa-resin bhodhi uye yakasangana-yakasangana yakasarudzika mitezo inosangana mune yakavhurika chimiro. Chigadzirwa chacho chinoratidzwa nekunaka kwakanaka kwekushisa, hukuru hwemakanika, kubatana kwakatendeka uye mashandiro ari nyore. Inowanikwa kune ese mafini eNH000-NH4.
Kune maviri marudzi ezvivakwa zverudzi urwu rwefuse zvigadziko; Imwe inogadzirwa neye fuse inotakura, Iyo bolting fuse chinongedzo chiri
yakaiswa kune anotakura, ipapo inoiswa kune static kutaurirana kweanotsigira / base. Iko hakuna anotakura kune chimwe chimiro,
uko iyo bhaundi fiyuzi yakaiswa zvakananga kune iyo static kutaurirana kweanotsigira / base. Iyo kambani inogona zvakare kugadzira mamwe asiri-akajairwa mabhesiki kune vatengi`requirements.
Mushure meiyo epurasitiki-jekiseni kadhi yakaiswa neanofambidzana uye fuse zvinongedzo, mabhesheni anoumbwa nekumisikidza kana kumisikidza ese maviri anokwanisa kuve mazhinji-chikamu akarongeka. FB15C, FB16-3J, FB19C-3J, Rt19 yakavhurika-dhizaini, uye mamwe akavezwa akaumbwa. Kune mashanu mafiyuzi saizi anowanikwa kusarudza kubva kune imwechete fuse base yeRT18N, RT18B uye RT18C, Kune maviri maseti e-mukati-mitsara yeRT18N. Imwe ndeye
yakaiswa ne fuse zvinongedzo fuse zvinongedzo zveiyo saizi. Iyo imwe ndeye yakasarudzika yakavhurika kutaurirana neakaviri kutyora mapoinzi. Iyo yese base unit inogona kutema simba. Rt18 mabheseni ese ari DIN njanji akaisirwa, pakati payo iyo RT18L yakagadzirirwa nechengetedzo yekuvharira kubva kune isiriyo mashandiro mune iri kutyora nyika.